Groundhog Day: ihe ọ bụ, mgbe a na-eme ememe na mkpa ya | Green Renewables
Portillo nke German | 04/05/2022 12:00 | Noticias
Ruo taa, anyị niile maara karịa ma ọ bụ obere banyere ndị ama ama ụbọchị groundhog. N'ọtụtụ oge, nke a nwere ike ịbụ n'ihi ihe nkiri Bill Murray mere nke ọma Stuck in Time. N'agbanyeghị na ọ bụ mmemme na-ewu ewu na United States, emume a gafere oke. Anyị nwere ike ịnụ ụtọ amụma Groundhog Phil na akụkọ Europe taa. Nke a bụ otu n'ime ọdịnala kacha atọ ụtọ na nke a na-echere ogologo oge na America.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Groundhog Day na mkpa ọ dị.
1 ụbọchị groundhog
2 Kedu mgbe bụ Groundhog Day
3 ebee ka emere ya
4 Canadian groundhog ụbọchị
5 Ụbọchị Groundhog na Penxutonne, Pennsylvania
Nke a bụ omenala na-adọrọ mmasị nke omenala America. Iji ghọta Groundhog Day na ihe ọ pụtara, anyị ga-alaghachi azụ n'oge. N'ezie, mmalite ya dabeere Europe, karịsịa na Candelaria. N'oge ememme a, e nwere omenala okpukpe ebe ndị ụkọchukwu na-ekesa kandụl.
N'oge a, a na-ekwu na ọ bụrụ na mbara igwe na-enwu n'isi ụtụtụ, oge oyi ga-adị ogologo. Omenala a gafere ndị Germany, ndị gbakwụnyere na ọ bụrụ na anyanwụ dị elu, hedgehog ọ bụla nwere ike ịhụ ndò ya. N'ikpeazụ, omenala gbasara America. N'ihe dị ka n'afọ 1887, ndị ọrụ ugbo US kwesịrị ibu amụma mgbe oyi ga-agwụ ka ha wee mara ihe ha ga-eme ihe ọkụkụ ha, ha wee kwekọọ na omenala a site n'ịgbanwe ya ntakịrị.
Iji mee amụma a, ha kpebiri ịdabere na omume anụmanụ. N'ihi ya, groundhog ghọrọ isi ihe ntụaka ya. Ha hụrụ otú o si akpa àgwà mgbe izu ike gasịrị ma kpebie ọgwụgwụ nke oyi dabere na ya. (The Game of Thrones folks nwere ike chọpụta ya...)
A na-ekwenyekarị na mgbe mgbịrịgba ala na-esi n'olulu a pụta, ọ na-esi n'ụzọ abụọ zaghachi. Ọ bụrụ na ọ nweghị ike ịhụ onyinyo ya n'ihi na ọ bụ ígwé ojii, ọ ga-ahapụ ili ya, n'oge na-adịghịkwa anya oyi gafeworo. Ka o sina dị, ọ bụrụ na anwụ na-acha, anụ ala ga-ahụ onyinyo ya wee laghachi zoo n'ime ili. Nhọrọ nke abụọ pụtara na anyị ka ga-echere izu isii ka oge oyi kwụsị.
Otú ọ dị, ekele maka ihe nkiri Bill Murray a kpọtụrụ aha n'elu, Groundhog Day nwere ihe ọzọ pụtara. Na ihe nkiri a, onye na-eme ihe nkiri na-anọgidesi ike n'otu ụbọchị ahụ. Ya mere, nye ọtụtụ ndị, a na-ejikọta ụbọchị na ime otu ihe ahụ kwa ụbọchị n'ụzọ ọrụ igwe ma ọ bụ na-agwụ ike.
Kedu mgbe bụ Groundhog Day
A na-eme omenala a na United States na Canada niile, n'agbanyeghị na ọ kacha ewu ewu na Punxsutawney. E nwere onye ama ama groundhog, Phil. Ọ bụ anụmanụ a hụrụ n'anya nke ukwuu, kwa afọ, ha na-ebupụ ya n'olulu ya iji lelee àgwà ya. Na-eche mgbe Groundhog Day bụ? Ụbọchị a bụ ihe dị ka ọkara n'etiti oge oyi solstice na oge opupu ihe ubi. Ya mere, A na-eme ememe ụbọchị a na February 2 kwa afọ.
ebee ka emere ya
A na-eme omenala a na United States na Canada. Ụbọchị Groundhog, nke a na-akpọ Groundhog Day na bekee, bụ omenala ewu ewu. Na Febụwarị 2, ndị America niile na-echere amụma Phil the Groundhog. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị bi na mpaghara ahụ nwere marmot nke ha iji mee amụma nke ha.
N'ezie na njedebe nke post a, ị ga-eche ma ha ziri ezi n'ezie. N'ụzọ dị ịtụnanya, Atụmatụ ahụ nwere izi ezi n'etiti 75% na 90%. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ijide n'aka na, n'ọtụtụ ọnọdụ, omenala ndị a ma ama nwere ike ịbụ ihe ntụaka iji hụ oge ole anyị nwere iji kwụsị oge oyi.
Canadian groundhog ụbọchị
Enwere ọtụtụ marmots ama ama na Canada: Brandon Bob, Gary the Groundhog, Balzac Billy na Wiarton Willie, ọ bụ ezie na Nova Scotian San kwuru na ọ nwere amụma kachasị elu.
N'agbanyeghị, e nwere band, ọkọlọtọ, nri, na fun na ọ bụla ememe. Anọ m na-atụsi anya ike na-echere ihe amụma afọ a ga-abụ.
Ụbọchị Groundhog na Penxutonne, Pennsylvania
Ọ bụ ezie na steeti ọ bụla na-eme ememe ụbọchị ahụ nwere ala nke ya, otu n'ime ebe nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị sonyere bụ Punxsutawney (Pennsylvania), omenala nke edobere kemgbe 1887, onye na-atụle Punxsutawney Phil Just groundhog ebe a bụ onye ọrụ.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-esi na mpaghara dị iche iche na-aga isonye na mmemme ụbọchị Groundhog nke Punxsutawney Groundhog Club haziri. N'ụbọchị ahụ ọtụtụ mgbe A na-ahụ ndị nọ na tuxedos na okpu kacha na-anụ ụtọ emume a n'etiti egwu na nri.
Kwa February 2nd, ndị nta akụkọ, ndị njem nlegharị anya na ndị otu klọb na-ezukọ ichere Phil ka ọ pụta ma nye amụma ihu igwe.
A na-ekwu na groundhog ahụ weere aha ya iji sọpụrụ King Philip, Duke nke Edinburgh, na ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ na-ahapụ ụlọ ya na Gobbler's Knob n'ime ime obodo dị nso na obodo ahụ. afọ na February 2 iji dọọ aka ná ntị na onyinyo gị ihe ihu igwe ga-adị.
Ọ bụrụ na Phil alaghachi n'ọgba mgbe ọ na-ahụ onyinyo, ọ bụ izu isii ọzọ nke oyi. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị gaghị ahụ ya, mmiri ga-abịa.
A maara Phil nke ọma maka ihe nkiri 1993 nke akpọrọ Groundhog Day, nke butere ngosipụta Groundhog na Oprah's Show na 1995. E tinyekwara ya na ọrụ nke usoro ihe nkiri MTV.
Aha ya toro nke ukwuu na na 2013, onye ọka iwu Ohio boro ya ebubo na "nkwupụta ụgha nke mmalite oge opupu ihe ubi," na-achọ ntaramahụhụ ọnwụ, na enyere ikike ijide abụọ maka amụma ụgha (2015 na 2018).
Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ inwe ike ịga otu n'ime ihe omume ndị a wee gbaa akaebe na ọ dị ndụ, mana ebe ọ bụ na ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ime ya, anyị ga-ewepụta ihe: bipụta akụkọ Phil, kirie ihe nkiri ọ na-anọchi anya ya ma ọ bụ naanị nye akụkọ obi ụtọ nke ụbọchị oke oke.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, Groundhog Day nwere mmalite na mkpa ma n'oge gara aga na taa. Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere Groundhog Day, ihe njirimara ya, otú ọ dị mkpa na otu esi eme ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » General » Noticias » ụbọchị groundhog
Echiche maka imegharị ihe